Business Directory | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 4
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမှာ Burma House စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ပြီ မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၄ မြန်မာများစုဝေးရာ ဖရီးမောင့်မြို့နဲ့ ဆီလွန်ကွန်တောင်ကြား အနီးက ဒေါက်တာမောင်မောင်သော် သွားဆေးခန်းနဲ့ ကပ်လျက် မြန်မာစားသောက်ဆိုင် တဆိုင် ဖွင့်ပါပြီ။ Burma House ပါတဲ့။ လိပ်စာကတော့ – 1810 Milmont Drive, Milpitas CA 95035 ဖြစ်ပါတယ်။ အားပေးနိုင်ကြပါပြီ။ ဖေ့စ်ဘွတ်လိပ်စာကတော့ – https://www.facebook.com/milpitasburmahouse Tags: ဆန်ဖရန်
LG မိုဘိုင်းဖုန်း မိတ်ဆက်အခမ်းအနား ကျင်းပ ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်)၊ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၄ LG ၏ နည်းပညာအသစ်အဆန်းများဖြင့် တီထွင်ပြုလုပ်ထားသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းများ ဖြန့်ဖြူးရန် Distributor အသစ်မိတ်ဆက်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် နတ်မောက်လမ်းရှိ ချပ်ထရီရမ်ဟိုတယ်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ( ၇ ) ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ LG Mobile ၏ Distributor အသစ်ဖြစ်သော New Myanmar Channel မှ ဦးစိုးငွေရ Project Driector မှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး LG Electric Myanmar မှ Managing Driector ,Mr Min Park က အမှတ်တရ...
Huawei Ascend P7 စတင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ် ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့တတိယအကြီးဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ်သည့် Huawei ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့ (သောကြာနေ့) ၌ နောက်ဆုံး ထုတ် စမတ်ဖုံးဖြစ်သည့် Huawei Ascend P7 ၏ စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို Sule Shangrila Hote (Grand Ballroom) ၌ နံနက် (၁၀) နာရီမှ နေ့လည် ၁၂ နာရီအထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားသို့ Huawei Device Myanmar မှ တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများ ၊ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ၊ Brand Ambassador ဖြစ်သူ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်နှင့်...
မိုးစက်ဝိုင်ကို ဘန်ကောက်အဲယားဝေးက သံတမန်ခန့်အပ် ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်)၊ ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၄ ဘန်ကောက်လေကြောင်းလိုင်းသည် ထူးခြားဆန်းပြားသောနေရာများသို့ ခရီးသွား ဝါသနာပါသည်ဆိုသော မိုးစက်ဝိုင် ( Miss Universe Myanmar 2013 ) ကို ဘန်ကောက်လေကြောင်းလိုင်း၏ ပထမဆုံး မြန်မာပြည် Brand Ambassador အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ အလံပြဘုရားလမ်းရှိ Park Royal Hotel ၌ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့က အခမ်းအနားဖြင့် ခန့်အပ်လိုက်သည်။ အခမ်းအနားမှူး အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ် ဆန်းထွဋ်မှဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဘန်ကောက်လေကြောင်းလိုင်း၏ ဒုတိယဥက္ကဌ မစ္စနာတီကာ က ဘန်ကောက်လေကြောင်းလိုင်း မြန်မာပြည်တိုးချဲ့ပျံသန်းမှုအစီအစဉ်နှင့် မိုးစက်ဝိုင်အား လေကြောင်းလိုင်းသံတမန် ခန့်အပ်ရခြင်းအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ မိုးစက်ဝိုင်ကိုယ်တိုင်က...
မြန်မာနဲ့ ထိုင်း ရိုးရာ စားဖွယ်စုံ – မှိုစားဖိုဆောင် ဖွင့်ပြီ မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၄ ဆီလီကွန်တောင်ကြားမှာ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းစားသောက်ဖွယ်ရာ စားသုံးနိုင်ဖို့ မြန်မာ-ထိုင်း ဇနီးမောင်နှံတို့က ‘မှို’ စားဖိုဆောင် – Moh Kitchen ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ 1244 S Abel St., Milpitas, CA 95035 . Phone (408) 262-3333 ဖြစ်ပါတယ်။ No tags for this post.
မြန်မာပြည်၏ ကိုးခုမြောက်လေကြောင်းလိုင်းသစ် မန်းရတနာပုံ ဖွင့်ပွဲကျင်းပပြုလုပ် ရန်နောင် (ဗုိုလ်တထောင်) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၄ ရတနာပုံ လေကြောင်းလုိုင်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမြင်ကွင်းတခု (ဓာတ်ပုံ – ရန်နောင် ဗုိုလ်တထောင်) မန်းရတနာပုံလေကြောင်းလိုင်းသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခွဲကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မန်းရတနာပုံလေကြာင်းလိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ၂၀၁၃ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှမှတ်ပုံတင် ပေးခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပလေကြောင်း ပျံသန်းရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ အခြေစိုက်၍လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ၂၀၁၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်တွင် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ရတနာပုံ လေကြောင်းလုိုင်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမြင်ကွင်းတခု (ဓာတ်ပုံ – ရန်နောင် ဗုိုလ်တထောင်) မန်းရတနာပုံလေကြောင်းလိုင်းသစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုးခုမြောက် လေကြောင်းလိုင်းသစ်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအသင်း (IATA) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့ပြလေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်...
မောင်ဝံသ၏ ဒေါင်းစာပေ နှစ် ၄၀ ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပ မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ ၁၄၊ နေ့ခင်းက၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မင်းကွန်း တိပိဋိကကျောင်းတိုက်မှာ ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာ သတင်းစာဆရာ မောင်ဝံသ ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဒေါင်းစာပေ (၁၉၇၃ – ၂၀၁၃) နှစ် ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာစာနယ်ဇင်းနယ်က ဧည့်သည်အများအပြား တက်ရောက်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျန်ရစ်သူ မောင်ဝံသမိသားစုက သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းကို မြန်မာငွေ ကျပ် ၅ သိန်း လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ No tags for this post.
အေးငြိမ်း ● စိတ်ပျက်စရာ မြန်မာစာရေးပုံ၊ ဘာသာပြန်ပုံနှင့် ကွန်ပြူတာ စာရိုက်ပုံများ https://t.co/cmGnZ0S72H https://t.co/6jFpASmyWW about 8 hours ago ReplyRetweetFavorite
နေလွဏ်းအိမ် ● အဖိုးတန်​စက္ကူ https://t.co/Feh4B4Ql6u https://t.co/NZB8HVg21y about9hours ago ReplyRetweetFavorite
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်သော ပညာရေး https://t.co/cLO5wUemyO https://t.co/cfg2sbcyfP about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite